SLT Sports:Mourinho: “Cristiano Ronaldo Wuxuu La Mid Yahay Zidane Cidkale Oo Lamid Ahina Ma Jirto” Iyo Qodobo Kale | Somaliland Today
← Muuska Oo Kaalin Mug Leh Ka Qaata Caafimaadka Maskaxda Iyo Jidhkaba.
“Qayrkeen Dugsibuu Samaystay Dabaylaha Uu Ka Galo” Guddomiyaha Olombikada G/Saaxil →
SLT Sports:Mourinho: “Cristiano Ronaldo Wuxuu La Mid Yahay Zidane Cidkale Oo Lamid Ahina Ma Jirto” Iyo Qodobo Kale
(SLT-London)-Tababaraha Chelsea ee Jose Mourinho oo waraysi dheer siiyay TVga laga leeyahay Faransiiska ee TF1 ayaa kaga hadlay arimo badan wuxuuna si gaar ah waraysigaa ugu amaanay gool dhaliyaha Real Madrid iyo xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo, isagoo sheegay inuu Ronaldo la mid yahay Zidane sidookalena ayna jirin cidkale oo la mid ahi.
Mourinho ayaa hadalkiisa ku bilaabay sidan: “Marka aad France joogto Ronaldo wuxuu la mid yahay Zidane, mana jirto cidkale oo isaga la mid ahi, waa ciyaartoy layaableh, waana mishiinka gool dhalinta, mana doonayo inaan Idhaahod waxa qofkastaaba iska ogyahay”.
Intaa kadib ayuu Mourinho ka hadlay difaaaca Real Madrid iyo xulka qaranka France ee Raphael Varane wuxuuna yidhi: “Qofkastaaba wuxuu sheega inuu Varane tagaayo Chelsea sababtoo ah xaqiiqdii wuxuu qofkastaaba ogyahay inaan jecelahay isaga,laakiin qofkastaaba wuxuu sidoo kale og yahay inuu Real Madrid sii joogi doono.”
Rooney Oo Guul Muhiim Ah Ku Hogaamiyay Xulka England,Xili Ay Ka Badiyeen 10 Ciyaartoy Oo Estonia Ah
Xulka qaranka England ayaa guul muhiim ah ka soo gaadhay xulka qaranka Estonia oo ay marti u ahaayeen waxayna kaga soo badiyeen 1:0, iyadoo uu goolka kaliya Wayne Rooney xulka qarnkiisa u dhaliyay. Estonia ayaa qaybtii danbe ee ciyaarta ku dhamaysatay 10 ciyaartoy kadib markii ciyaarta laga saaray kabtanka Estonia ee Ragnar Klavan.
England ayaa marti u ahayd xulka qaranka Estonia waxayna doonayeen inay guul mihiim ah ka soo gaadhaan si ay u sii wataan qaab ciyaareedka fiican ee ay ku bilawdeen is reeb reebka Euro2016 iyagoo soo guulaystay labadii kulan ee ugu horeeyay.
Inkasta oo ay England gacanta sare lahayd qaybtii hore ee ciyaarta ayayna haddana u suurto galin inay dhaliyaan wax goolal ah. Rooney ayaana xulka qarankiisa ka qasaariyay laba fursadood oo goolal noqon kari lahaa. Jack Welshire iyo Jordan Henderson ayaana ku raaxaysanayay khadka dhexe iyagoo ahaa labada ciyaartoy ee qaybtii hore ee ciyaarta England ugu fiicnaa. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qabtii danbe ee ciyaarta ayay dhibaato horleh soo foodsaaray xulka qaranka Estonia iyadoo markii ay qabtii danbe ee ciyaartu socotay saddex daqiiqo oo kaliya ciyaarta laga saaray kabtanka xulka Estonia ee Ragnar Klavan kadib markii uu qalad ku galay Delph isagoo qaybtii hore ee ciyaartana qaatay kaadhka digniinta ah, sidaana waxay Estona noqotay 10 ciyaartoy.
Roy Hodgson ayaa daqiiqadihii 61 aad iyo 64 aad ciyaarta badal ku soo galiyay Alex Oxlade-Chamberlain iyo Reheem Sterling kuwaas oo sare u qaaday heerka weerarka England. Daqiiqadii 73 aad ayayna England la wareegtay hogaanka ciyaarta kadib markii uu kabtan Wayne Rooney xulka qarankiisa u dhaliyay gool ku yimid laaga xorta ah, ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay England ku hogaaminayso. Ugu Danbayn Ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1:0 ay England guushu ku raacday waana guushii saddexaad oo isku xigta ee ay saddexda libaax ka gaadhaan is reeb reebka Euro2016.
Ozil Oo Doonaya Inuu Arsenal Ka Tago Bisha Janaayo Iyo Khedira Oo Booskiisa Lagu Bedelayo.
Mesut Ozil ayaa doonaya inuu ka tago Arsenal bisha Janaayo, waxaana Gunners ay diyaar u tahay inay ganacsigaas sameyso, sida ay ku warameyso Daily Mail.
Bayern Munich ayaa isku diyaarineysa inay dalab 30 milyan ginni ka soo gudbiso Ozil kaasoo Arsenal kaga soo biiray Real Madrid xagaagii hore isagoo ku yimid lacag rikoor ah oo gaareysa 42.5 milyan ginni.
Daily Mail ayaa fahamsan in xiddiga Jarmalka uusan ku faraxsaneyn Arsenal, waxaana taas ugu wacan in Arsene Wenger uusan ka ciyaarsiineynin xiddigaan booska uu jecel yahay.
Ozil ayaa ku laabtay Jarmalka isbuucii hore waxaana ku soo baxay dhaawac jilibka ah isagoo garoomada ka maqnaanaya muddo seddex bilood ah.
Wenger ayaa inta badan sameynin wax ganacsi ah bisha Janaayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu iska iibiyo Ozil oo Sami Khedira ka keensado Real Madrid.
Arsenal ayaana laga yabaa inay sidoo kale u dhaqaaqdo labo xiddig oo Jarmal ah Matts Hummels iyo Julian Draxler.
Arturo Vidal Oo Baxaya Iyo Juan Mata Oo Ka Bedelaya Booskiisa Juventus.
Manchester United Juan Mata ayay lala xidhiidhiyay inuu u dhaqaaqayo Juventus ka dib Kubadsameeyaha markii ay soo baxday in Arturo Vidal uusan ku deganeyn kooxda Serie A ka dhisan.
Vidal ayaa la sheegayaa inuu ku jahwareersan yahay kooxda ka dib markii lagu ganaaxay 100 kun euro isagoo dagaal ku galay meel lagu caweeyo ka hor kulankii Roma ee axadii hore.
Wargeyska Talyaaniga ee Corriere dello Sport ayaana sheegaya in Juventus ay raadin doonto inay ku bedesho xiddiga reer Chile dhigiisa reer Spain Juan Mata.
Xiddiga reer Spain oo Man United ku soo biiray bishii Janaayo ayaa arki kara in waqtigiisa garoomada ee Old Trafford inuu yaraado xilli ciyaareedkan madaama ay kooxda yimaadeen Angel di Maria, Radamel Falcao iyo Ander Herrera.
Vidal ayaa isna in muddo ah diirada u saarnaa kooxda Manchester United.